Damu Jadiid oo Hadimo ku foorarta Madaxweyne Farmaajo diyaarinaya. | YoobsanNews.com
Dad shicib ah oo ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada AMISOM
Maxeey ka cabanayaan Soomaalida caafimaadka u doonta dalka Hindiya.?
Damujadiid oo Carqalad ku ah Wadahadallada Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca Islamarkaana Wada Abaabul ay ku Majaxaabineyso Dowladda Taageerada Shacabka heysata ee uu hormuudka ka yahay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
Ilo lagu Kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in Qamaamiirta Koox Diimeedka Damu Jadiid ay Shir dhawaan ku yeesheen Dalka Turkey islamarkaana ay isku afgarteen qorshayaal gurracaan oo ay ku gacan bidixeynayaan Dadaalladda Dowladda Soomaaliya ay ka wado qeybaha Dalka.
Urur Diimeedka Damu Jadiid ee Afartii sano la soo dhaafay dub u dhac ballaaran galiyay Dalka Soomaaliya oo majaraha ay u haayeen ayaa haatan maleegaya Dabinno ay ku majaxaabinayaan Dadaallada Dowladda Madaxweyne Farmaajo.
Dadaallada Damu Jadiid ay is hortaaga ku sameyn rabaan waxaa ka mid ah Wadahadallada Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca oo intii dalka hoggaankiisa ay majaraha u hayeen ku fashilmeen in ay heshiisiiyaan.
Damu Jadiid ayaa Fadeexad u arka in Fashilkoodii Dub u heshiisinta Galmudug iyo Ahlusunna ay si fudud ugu guuleysato Dowladda Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Sidaas daraadeed ayey u xil saareen in ay fur furaan Wadahadalladaasi Xildhibaanada kala ah Mahad Maxamed Salaad ( Mahad Caano Coast ) iyo Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo horay u ahaa intii Damu Jadiid dalka ay ka arriminayeen Wasiiru Dowlihii Madaxtooyada iyo Wasiirkii Amniga.
Dhinaca kale Damu Jadiid oo lumiyay Kalsoonida Shacabka iyo Baarlamaanka mudadii ay hoggaanka dalka majaraha u hayeen ayaa wada Abaabul Mooshin ka dhan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si hoggaanka Dalka ay dib ugu soo noqdaan.
Waxaana Mooshinkaas sida ay xaqiijinayaan ilo xog Ogaal ah ay doonayaan in ay ku diyaariyaan muddo 2 Bilood ah.
Hadaba Su’aasha isweynta Mudan ayaa waxa ay tahay Damu Jadiid oo 4 Sano ee dalka ay maamulayeen galiyay dhibaatooyin isugu jira Dhaqaalo Xumi, Amni darro, Ku tagri fal Awoodda Dowladda , Iska horkeenka Beelaha Soomaaliyeed, Maamullada iyo arrimo kale aan loo aayin side Umadda Soomaaliyeed oo Rajo Yidadiilo leh ka filaya Dowladda Cusub ee Madaxweyne Farmaajo sida ay ku Aqbali karaan in Saaxada Hoggaanka Soomaaliya ay soo quu dareynayaan Kooxdii Dib u dhaca ee Damu Jadiid.
Soomaaliya ayaa haatan heysa Tubta toosan iyadoo sameysaneysa Ciidan Qaran oo Wajiga hore Cadadooda ay dhan yihiin 18,000 Askari ( Sideed iyo Toban kun oo Askari).
Ciidamada iyo Shaqaalaha Dowladda Soomaaliyeed ayaa helay Kalsooni fiican islamarkanaa xuquuqahooda Mushaar la isla meel dhigay in beli weliba ay joogto u helaan.
Hadaba Damu Jadiid ma Dumiyaha Dowladdaa haddii ay Hantaaturinayaan Wadahadal lagu mideynayo Galmudug iyo Ahlusunna , haddii Dowladda Danta Dalka iyo Dadka ay u maleegayaan Dabin ay ku majaxaabinayaan.
Mahad Caano Coast oo Damu Jadiid u wakiisheen is hortaaga Wadahadallada Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca waa Shaqsi Kursigiisa Xildhibaan Xaaraan yahay kadib markii ilaaladiisa si xaqdarro ah ay ugu codeeyeen iyadoo codkooda la doodsiiyay Ergadii Rasmiga ahayd ee Beelaha Kursigaas leh.
Sidoo kale Cabdirisaaq Cumar Maxamed Wasiirkii Amniga Dowladdii ay majaraha u hayeen Damu Jadiid waa shaqsi lagu xanto in uu gacansaar laleeyahay Al Shabaab, waxaana tusaalo idinkaga filan markii xilka Wasiirka Amniga uu wareejinayay uu qiray in intii uu Wasiirka Amniga ahaa in Al Shabaab Walxaha Qarxa ay uga soo dagaan Dekedda Muqdisho.
Damu Jadiid weli waxaan ka dhaqmin Ceebta iyo Wajigabaxa ay ka qaadeen Doorashadii 8 February 2017 oo si ay ugu guuleystaan ay Maciin bideen in Ethiopia oo ah Cadowga 1aad ee Soomaaliya ay ka dhigteen Campaign-kooda Doorashada , islamarkaana ay u hubiyeen Dhul Soomaaliyeed islamarkaana iyagoo Ethiopia Raali gelinaya ay u gafeen Ciidankii Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo la xasuusto beri Heybaddii dalkeenna iyo Umadda Soomaaliyeed ay siiyeen.
Mohamed Ahmed Jimale.
Previous: Madaxweyne Farmaajo & R/wasaare Kheyre haddii ay dhab ka tahay in ay la dagaalamayaan Musuqmaasuqa isbaarooyinka shacabka ha ka qaadaataan
Next: Stephen Michael Schwartz: “Jab kasta oo na soo gaara, xittaa dhimashadii dhacday waa naga go’an tahay in Soomaaliya aan nabadda dib u soo celino”
Xaalad CUSUB oo ku soo korortay Isgoys-yada Muqdisho
VIDEO NEWS: Guddoomiyaha Tasho Community “Haddaad gabar wax bartid waxeey la mid tahay adigoo mushtamac wax bartay”